Vaovao - Aiza no hampiasa ampahany plastika
Aiza no hampiasa ampahany plastika
Ny ampahany plastika dia vita amin'ny alàlan'ny famolavolana bobongolo miaraka amin'ny fomba fanodinana hafa, izay ny habe sy ny asany dia mifanaraka amin'ny takian'ny mpamorona.
Maherin'ny 80% amin'ireo faritra plastika novolavolain'ny famolavolana tsindrona, izay no fomba lehibe ahazoana ampahany amin'ny plastika.
Ny sombin-tsolika sy ny vokatra vita amin'ny tsindrona dia niditra tamin'ny lafiny rehetra amin'ny asan'ny zanak'olombelona, ​​be mpampiasa amin'ny fifandraisana elektronika, fitaovana elektrika, elektrika, fitaovana, fiarovana, fifamoivoizana fiara, fikarakarana ara-pahasalamana, kojakoja fiainana andavanandro ary sehatra hafa.
Ny sokajy vokatra lehibe dia:
1. Fifandraisana elektronika sy fitaovana elektronika ho an'ny mpanjifa (trano plastika, fonosana, boaty, fonony)
Finday, telefaona, fahitalavitra, telefaona horonantsary, milina POS, lakolosy varavarana.
2. Fitaovana elektrika (fitoeram-plastika, fonony, fitoeran-javatra, fototra)
Mpanamboatra kafe, juicer, vata fampangatsiahana, fividianana rivotra, mpanasa lamba ary lafaoro mikraoba.
3. Fitaovana elektrika
Metatra elektrika, boaty elektrika, kabinetra elektrika, mpanova hatetika, fonosana insulate ary switch.
4. Fitaovana (fonenana plastika, fonony)
Voltmeter, multimeter, barometre, detector fiainana
5. Fitaovana fiara
Sarin'ny vatan-dasera, fonosana bateria, modely eo aloha, boaty fanaraha-maso, bara fananganana seza, placenta kely, fender, bumper, fonosana chassis, sakana amin'ny tabataba, rindrin'ny varavarana aoriana
Ampahany plastika amin'ny fiara
6. Fitaovana fifamoivoizana sy fitaovan'ny fiara (takelaka, takelaka)
Jiro famantarana, famantarana, tester toaka,
7. Fitsaboana ara-pahasalamana sy ara-pahasalamana
Jiro miasa, sphygmomanometer, syringe, dropper, tavoahangy fanafody, masinina, fitaovana fanongotana volo, fitaovana fanatanjahan-tena
8. filàna isan'andro
Seza plastika, borosy nify plastika, fitoeran-plastika, siny plastika, plastika, kaopy plastika, solomaso, fonony, fandroana, kilalao
Ny vokatra samihafa dia mitaky habe, endrika, fampisehoana, endrika ary fampiasa samihafa, noho izany misy karazana bobongolo sy fomba fanorohana tsindrona ampiasaina hanamboarana azy ireo.
Mestech dia manana mihoatra ny 10 taona ny famokarana lasitra tsindrona sy ny famokarana tsindrona, afaka manome anao lasitra fanindromana namboarina sy vokatra ary tsindrona fampidirana araka ny famaritana anao.
2. famolahana tsindrona ho an'ny ampahany kely, ampahany lehibe, kofehy, kitapom-batsy, akorandriaka, loko roa, ary famolavolana vy.
3. Fandokoana na haingon-trano: fanonta lamba, sary hosodoko, fanodinana herinaratra, ravaky ny bobongolo anaty, fanontana rano.
Raha mila vokatra plastika amin'ny vokatrao ianao, na mila mahalala bebe kokoa, dia mifandraisa amin'i Mestech raha hanonona teny na fanazavana fanampiny.